20 BBQ Menu Ideas and Recipes for a Summer Cookout - Dị Ọcha - Nri
Techaa Anu Ulo Atụmatụ & Ndụmọdụ Nke Nrụgide Agba Style Ahụike Akwụkwọ Ihe Ndozi Ibu Ibu Nyocha Nyocha
20 BBQ Menu Ideas na Recipes nke Ga-Agbanwe Partylọ Azụ Gị
Ọ dịghị ihe gbagwojuru otu ụbọchị nọrọ n’èzí na ndị a hụrụ n’anya na mmanya na-atụ oyi na aka. Mgbasa ụtọ nke azụ ụlọ na-eri nri nwere ike ịme ka ọ dị mma. Lee 20 BBQ echiche menu ga-amasị ndị ọbịa gị (na picky ụmụaka). Foto kemmiri ihe anyụ , grilled ọka , a ìhè gbagọrọ agbagọ na pụrụ ime ihe nile burger na ihe nile di n’etiti. Anyị ga-eweta biya.
RELATED: 8 Grilling Mejọọ I Nwere Ike Ime
Nnu & Ifufe
Nri menu: Ihe ọ Theụ Dụ
1. Guava Mezcal Mule mmanya
Agbaji ọla kọpa. Were usoro a site na ịgbanye ụtọ ihe ọ guụ guụ guava na smoky mezcal maka ihe ọ lụ lụ lime ọdịnala na biya ginger. (Daalụ maka echiche ahụ, Aida Mollenkamp.)
2. White Sangria na piich na beri
Mee ka ọkacha mmasị gị na Riesling dị ndụ na ihe ọ juiceụ peụ piich na-atọ ụtọ. (Mmanya oroma ahụ agaghị emerụ ahụ, ma.) Gbanwee ice maka mkpụrụ osisi oyi kpọnwụrụ ka ọ ghara ịmịkọrọ.
3. Whiskey Lemọnade na Mmanụ a Simpleụ Mfe Sirop
Onwere ihe ọ bụla na-eti mkpu n'oge okpomọkụ karịa lemonade mmiri oyi? Yep: ididị toro Heidi Larsen nke ejiri ahịhịa na mmanụ a honeyụ na-achaghị acha mee. Mint na bourbon na-amasị anyị.
Nri menu BBQ: Ndị Appetizers
4. Oseose Shrimp Tacos na Mango Salsa
Tụlee oge ezumike ndị a nke ebe okpomọkụ ị na-agụsi agụụ ike. Ihendori na-ekpo ọkụ, cayenne, chile ntụ ntụ na jalapeño na-edebe ihe ọkụ mgbe mango na ihe ọ andụ juiceụ lime dị ọhụrụ na-enye enyemaka dị jụụ.
5. Achịcha Mịrị Mmiri-Feta Skewers
Nke a bụ ọhụụ ọhụrụ. Ihe ngosi grill ole na ole ga - etinye ogwu ohuru ohuru na nkpuru osisi kachasi nma nke oge onye obula, obughi ikwu balsamic vinaigrette.
6. Akpụkpọ anụ ọkụkọ Buffalo
Nku ka enwetara ihe ndi mmadu na-eme enyi. Akụkụ kachasị mma banyere ndị a, ndị na-ebido ibu? Ha anaghị enwere onwe ha, enweghị akwa nhicha achọrọ. (Ọfọn, ma eleghị anya otu.)
Nri menu: Salads
7. Achịcha Peach na Halloumi Salad na Lemon-Pesto Uwe
Ghaa Siza ka ọ dị maka mgbasa ozi mara mma nke ejiri mpekere nnu nke halloumi, mkpụrụ osisi peach na mkpụrụ osisi pine ọhụrụ. Anyị kwuru maka mgbakwasa ụkwụ basil-citrus? Ee, gaa n'ihu ma mee nke abụọ.
8. Chilled Kukumba Salad
Egela ụmụ gị ntị. Obere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ anaghị emerụ onye ọ bụla. N'ezie, ha ga-ahụ oge a, chilled cukes na-enye ume ọhụrụ mgbe ha gwuru n'ogige.
Nchịkọta BBQ: Ndị Mmalite
9. Salmon Burgers
Anụ ehi, onye? Salmon bụ belle ọhụrụ nke BBQ, ọ na - ewetakwa Old Bay, dill ọhụrụ na tangy coleslaw na ya.
10. Mmanụ aeyụ-Wayo Ọkụkọ na Akwukwo nri na Foil
Kechie mmiri ara ehi na-atọ ụtọ na ihe kachasị amasị gị ma sie nri ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ na nke a dị ka mmeri ugbu a, chere ruo mgbe ịchọtara na enweghị nhicha.
11. Nri nwayọ ewepụ ezi anụ ezi
Anụ a na-atọ ụtọ nke na-atọ ụtọ bụ anwansi n'onwe ya, mana anyị nwere mmasị ikpo ya elu na bun na ọtụtụ coleslaw. Kpoo quesadillas maka umuaka na nri ndi ozo.
Foto: Eric Moran / ygha: Erin McDowell
12. Osisi Lemọn na ahịhịa Lemon-Herb
Ihe kachasị mma na efere a (nke ọma, ma e wezụga zippy, ihe jupụtara na umami)? Nwere ike ịghaghachi azụ na mmanya na ụfọdụ chitchat mgbe steak marinates.
Nri menu BBQ: Nri dị n'akụkụ
13. Cauliflower ‘Nduku’ Salad
Onwere ihe kọlịflawa na-enweghị ike ịme? Anyị echeghị. Poteto nwetara buut, mana nke a dị ka creamy dị ka ọkọlọtọ na yogọt Greek, utoojoo ude na mọstad Dijon na ngwakọta. Lee ya, spuds.
14. Jalapeño-Ube oyibo Mac na Chiiz
Mfri eke, butere avocados na ose na-acha akwụkwọ ndụ chiles bụ ụtọ egwuregwu maka ooey-gooey ọcha cheddar. Tinye kernel di nkpuru obi di uto maka ihe oriri na-ato uto, achicha achicha maka crunch ma obu ihe oriri di oku karie.
15. Osi Aioli Ghere eghe oka
Dị ka BBQ menu echiche na-aga, oge ọkọchị a na-enweghị isi. Karịsịa mgbe ị na-eji uwe ya Sriracha aioli. Tinye ihe ọ juiceụ juiceụ lime, queso fresco na ntụ ntụ maka elote nke sitere n'ike mmụọ nsọ.
Kitchen Na-ese n'elu mmiri
16. Achịcadụ eghe na Salsa ohuru
Nri ube oyibo bụ ihe. A citrusy, ose, ihe mara mma. Kpo ha elu na ihe di na oge na nnu nnu nnu. Feta ma ọ bụ ewu cheese na-arụ ọrụ, kwa.
Foto: Nico Schinco / ygha: Erin McDowell
Nri menu: Desserts
17. 3-Oji oroma Granita
Enwere ihe ole na ole na-enye ume ọhụrụ dị ka ngaji ntu oyi nke akpụrụ akpụ. Tinye ya na iko nke Champagne ka o zoo n'abali mbu (ma obu abuo).
18. Lemọn-Berry mpempe akwụkwọ Pan Trifle
Meringues a na-arụ n’ụlọ na-eme ka mfe a kesaa ihe dị ụtọ. Kidsmụaka gị nwere ike inye aka mee ka ịpịa ya akụ ma ọ bụ tụgharịa mkpụrụ osisi ahụ na mmiri lemon na shuga.
19. Corntọ Ọkụ Donut Rụrụ
Ndị a dị ka ịtinye aka na-eri ahụ dị ka ha si ele anya. Nzuzo na nke a decadent bulie ude ndochi? Otutu oka kporo nku. (Ee, n'ezie.)
20. Chocolate-Mgba kuki Mgwakota Mpe
Gaghị eme agadi karịa ka dunk a graham cracker (ma ọ bụ ngaji) banye na ọgwụgwọ a na-enweghị atụ. Ije ozi a n'akụkụ s'mores ojii na ị ga-ukara onye nnabata na ndị kasị.
RELATED: 14 ​​Desserts Dị ụtọ iji mee ihe na-eme ihe
Categories Ime Ụlọ Diy #actagainstabuse
ezigbo enyi m bụ ndụ m
ọgwụgwọ maka ntutu ntutu na uto
kacha mma agba egwú mgbatị videos maka ibu ibu
nkwuputa na ụbọchị lentpo
ihe oyiyi nke ubi mara mma
esi chịkwaa ntutu ịda maka nwoke